Traffic Kwete!, Anwendung kuziva maradara emigwagwa | IPhone nhau
Traffic Kwete!, Anwendung kuziva maradara emugwagwa
Imwe yemabhenefiti akakosha ekubatanidzwa kweGPS mune nharembozha yaive yekufambisa, iyo yakawedzera kumitengo yedata yakatibvumidza isu kuwana ruzivo munguva chaiyo mumigwagwa uye zviitiko zvavo, chinonyanya kufadza ndechekuti zviziviso zvezvose zvakagadziriswa uye nharembozha.
2 Mashoko ekuvandudza
Zviripachena kuti nyeredzi chimiro chekushandisa ibasa reyambiro yeradar. Traffic Kwete! Iyo ine Robser Premium dhatabhesi, iyo inovimbisa kuti isu tiri kumusoro-ku-kudhara maererano ne kukurumidza kudzora. Ehezve, kunyangwe kune zvakajairika vashandisi zvingave zvakakwana, ini ndinokurudzira kuzadza nzira pamwe nechimwe chikumbiro kana sevhizheni yambiro sevhisi (senge Waze kana Social Drive) kana tichida kuve neruzivo rwakawanda sezvinobvira.
Nyevero dzeRadar dzinoitika chete munzira kwayo yekufamba, chimwe chinhu chisina mamwe maratidziro ekuyambira radar uye anokosheswa. Zvimwe sarudzo dzinonakidza senge rinonzwika izwi rinokurudzira kana uchienda pakumhanya chaiko, yakatenderera nzira, chaiyo yekumhanyisa mhanyisa ine GPS data kana notisi kutinyevera nechidzitiro chakadzimwa.
Chinhu chakanyanya kukosha pane zvese ndechekujekesa kuti mashandiro acho anonyatsoita basa rawo. Ndokunge, inotinyevera nezvema radar munzira yedu, inotipa mutengo wepeturu, taura zviitiko yetraffic kuwana data kubva kune akawanda masosi uye kunyange inotibvumidza isu kuti titarise traffic makamera ari munzira. Asi kune zvimwe zvinhu zvisingatsanangurike.
Rondedzero huru yekuvandudza ndeye dhizaini. Kunyangwe chiri chokwadi kuti inoenderana nekushandisa zvinyowani zvinhu zvakasanganiswa neApple muXcode, zviri pachena pakuona kwekutanga kuti chishandiso hachina kunyatsoshanda mune ichi chinhu. Mifananidzo haishandisirwe zvinoenderana (mumutsara wepamusoro wemepu yemigwagwa, mamwe akazadzwa uye mamwe haana chinhu, semuenzaniso), skrini yekunyevera yakanyanya kureruka uye kazhinji inopa pfungwa yekuti kusimudza chiso kunouya kuzobatsira. tsigira kumhanya kumeso.
Kuona vakwikwidzi vavo isu hatigone kurara pasi zvakare maoko kumusoro, nekuti dzimwe nzira dziri muchikamu dzakafanana kana dzakaipisisa maererano neshandisi yekushandisa. Asi chenjera, mashandiro eapp yacho anopfuura ekururamisa uye dhizaini ichiri chinhu chinogadziriswa mune ramangwana rekuvandudza, saka kana uchifanira kusarudza pakati peapp yakanaka isingashande nemazvo uye isina runako runoshanda nemazvo, iyo sarudzo yechipiri yakajeka. Uye isa kusarudza radar yambiro, neruzivo rwakanakisa rwandave narwo rwakave neiyi.
Radar HAPANA Pro: Radar detector3,49 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Traffic Kwete!, Anwendung kuziva maradara emugwagwa
Kudengenyeka kwenyika kuTaiwan kwakakuvadza TSMC kupfuura zvaimbofungidzirwa
Zvinoda marii kugadzirisa iyo iPhone kana iPad skrini paApple?